Nagaa qe’eefi naannoo keenyaa tikfachuun gahee keenya kan jedhan hawaasni aanichaa, borus qaamolee nagaa ummataa kabachiisan waliin qindoomnee hojjenna jedhan. Mootummaan ammoo haqa keenya har’a maallaqaan bitachaa jirruuf wabiin keenya Mana Murtii Aadaa waan ta’eef. dhiyeenyatti rakkoo keenya akka nuuf furuuf hojii qabatamaatti dafee akka nuuf seenu barbaanna jedhan. Rakkoon dhiyeessi qorichaa, hanqinni barsiisaafi qaala’iinsi jireenyaa dhimma xiyyeeffannoo addaa barbaadudha ta’uus hawaasni aanichaa marii koreewwan dhaabbii waliin taasisan irratti kaasuu hin daganne.
Ummanni aanichaa qindoominaan nageenya isaa tikfachuun kan dinqisiifatamudha kan jedhan Obbo Diriirsaan, hooggansi aanaa komiiwwan ummanni kaasuuf deebii kennuuf gahumsa qabaachuu isaanii mirkaneessuun rakkoolee ka’an ni furu amantaa jedhun qaba jedhan. Itti dabaluun, gaaffii bu’uuraalee misomaa ummanni kaasuuf, waadaa sobaan ummata gowwomsuun waan hafeef, misooma keenya karooraan hoogganaa gaaffii ummata keenyaa irraa jalaan furaa deemna jedhan.
Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee, marii hawaasa waliin taasise irratti komii hawaasni waltajjii irratti kaase bu’uura godhachuun, pirojeektiiwwan ijaarsa riqicha Laga Gumaroo Bara 2012 jalqabee sababa jijjiirraa diizaayinii taasifameen harkifateefi riqicha ganda Waacciifi Burruusaa walqunnamsiisu bara 2014 ijaarsisaa eegalee sababa hanqina baajataan harkifates daawwateera.
Koreen kun oolmaasaa guyyaa boruutiin Aana Goreetti pirojektoota misoomaa adda addaa kan daawwatuufi hawaasa aanichaa wajjinis ni mari’ata
Toorbee kana 5976
Ji'a kana 84228
2008 irraa eggalee 5571504